Fiainan’antoko :: Hanova rafi-pitantanana sy fitsipika anatiny ny TIM • AoRaha
Fiainan’antoko Hanova rafi-pitantanana sy fitsipika anatiny ny TIM
Hitondra fanavaozana maro ireo mpikambana rehetra ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) mba hahafahana mamerina indray ny heriny, mandritra ny kaongresin’ny antoko hatao raham­pitso sy amin’ny sabotsy ho avy izao. Miandry fatratra ny valin’ny fangatahana nataony tany amin’ny minisiteran’ny Atitany kosa ity antoko ity, taorian’ny filazan’ny Tim ny fipetrahany eo amin’ny toe­ran’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara.
“Hamerina ny tanjaka na­nanan’ny Tiako i Madaga­sikara sady hampahafantatra fa mbola mijoro ireo mpikambana. Hohamafisina ireo fitsi­pika anatiny mba hialana amin’ny famadihana palitao sy hanatanterahana ny hevitra hijoroany, dia ny fiarovana ny sata demokratika sy ny fampiharana ny tany tan-dalàna”, hoy Ramalason Olga, sekre­tera jeneralin’ny Tim.
Nampahafantariny omaly tetsy amin’ny foibe n’ny antoko tetsy Belair Ampandrana ny fandraisana anjaran’ireo mpikatroka rehetra manerana ny Nosy amin’ izay kaongresy hatao eny amin’ny Magro Tanjombato izany. Milaza ny handray anjara amin’ireo fifidianana rehetra ho avy ny Tim. Nanen­tana ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) kosa ry zareo mba hamerina hanamarina ny lisi-pifidianana ho fisorohana ny hala-bato.
ny antoko tim ankehitriny , dia efa antoko tsy manana hery matanjakanintsony , satria efa tsy manana fahatokisana amin’i ravalomanana intsony ny malagasy ; porofo ny vokam-pifidianana farany teo. midika fa tsy te hiverina amin’ny jadona ny vahoaka , fa te hihaina fandrosoana miaraka amin’ny filoha andry rajoelina
Fampandrosoana :: Harafitra ny politika vaovaon’ny fitsinjaram-pahefana